कार्यदलले भागबण्डा टुङ्ग्यायो, कुन प्रदेशमा कसको मुख्यमन्त्री ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कार्यदलले भागबण्डा टुङ्ग्यायो, कुन प्रदेशमा कसको मुख्यमन्त्री ?
कार्यदलले भागबण्डा टुङ्ग्यायो, कुन प्रदेशमा कसको मुख्यमन्त्री ?
माघ १४ गते, २०७४ - १७:३०
काठमाडाैं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यदलले ६ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागवण्डा टुंगो लगाएको छ । अाइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भए लगतै कार्यदलले प्रदेशको प्रमुख पद भागबण्डा टुंगो लगाएको हो ।
जसअनुसार चार मुख्यमन्त्री र चार सभामुख एमालेले लिने र माओवादीले दुई मुख्यमन्त्री र दुई सभामुख पाएको छ । त्यसैगरि उपसभामुख माओवादीले चार वटा र एमालेले दुई वटा प्रदेशमा पाउनेछ ।
प्रदेश नम्बर ३, ४, ५ मा एमाले र ६ र ७ मा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएको स्रोतले खबरडबलीलार्इ जानकारी दियो ।
त्यसैगरि सभामुखमा भने प्रदेश १, ३, ६ र ७ को एमालेले पाएको छ । त्यस्तै ४ र ५ को सभामुख माओवादीले पाएको छ । एमालेले सभामुख लिएको प्रदेशमा माओवादीले उपसभामुख लिनेछ भने माओवादीबाट सभामुख भएको प्रदेशमा एमालेबाट उपसभामुख हुनेछन् ।
माघ १४ गते, २०७४ - १७:३० मा प्रकाशित